सेयर ब्रोकरहरुको सिन्डिकेट : आजबाट अनिश्चितकालका लागि सेयर कारोबार बन्द !
ARCHIVE, SPECIAL » सेयर ब्रोकरहरुको सिन्डिकेट : आजबाट अनिश्चितकालका लागि सेयर कारोबार बन्द !
आजबाट अनिश्चितकालका लागि सेयर कारोबार बन्द भएको छ । सेयर ब्रोकरहरुले आजबाट अनिश्चितकालीन शेयर कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
शेयर ब्रोकरको कमिसनमा भ्याट लगाउन आन्तरिक राजश्व विभागले पत्र काटेपछि त्यसको बिरोधमा ब्रोकरहरुले विहीबारको सेयर कारोबार बन्द गरेका छन्। ब्रोकर नम्बर ५३ इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट र ५२ नम्बर ब्रोकर सुन्धारा सेक्युरिटीजलाई पुरानो सबै भ्याट तिर्न पत्र लेखेको हो। भ्याट दायित्व अनुसार ५२ नम्बर ब्रोकरलाई ६० लाख र ५३ नम्बर ब्रोकरलाई डेढ करोड रुपैयाँ भ्याट बुझाउन निर्देशन दिइएपछी ब्रोकरहरुले यस्तो आन्दोलन गरेका हुन् ।